Wararka - Waa maxay Shaqada Taabashada Cadka?
Muxuu Yahay Shaqada Hayaha Cadka?
Shayga cadka wuxuu ku habboon yahay guryaha, hudheelada, musqulaha, musqulaha, meelaha caamka ah, meelaha madadaalada iyo meelaha kale ee gaarka loo leeyahay iyo kuwa caamka ah.
Xubinta toosan ee haysa ayaa ah unug inta badan la isticmaalo. Cadka haysa toosan waxay u ogolaataa cadka hayaha in la dhigo meelo kala duwan iyada oo aan loo baahnayn in lagu rakibo darbiga, taas oo kordhinaysa baaxada isticmaalkeeda.
Isla mar ahaantaana, waa ku habboon tahay oo dhakhso badan in lagu rakibo nudaha haysta.Waa sahlan tahay oo nadiif ahaansho.
Sarkaalka nudaha sitaa wuxuu ka ilaaliyaa in wasakhda unugyada ku wasakhoobo gacmaha marka uu karinayo ama samaynayo hawlo kale, taas oo dadka u keenta habboonaan iyo nadaafad.
Dogguan Shengrui Metal Crafts Co., Ltd. waa soo saare xirfadlayaal ah oo dhoofisa ku takhasusay naqshadeynta iyo soo saarista noocyada kala duwan ee dheelitirka biladaha isboortiga iyo jillaab isboorti bir ah. birta haysta iwm.
Dhammaan alaabooyinkeennu waxay u hoggaansamaan heerarka tayada caalamiga ah Xarumaheena si fiican u qalabaysan, shaqaale si heer sare ah u tababaran iyo xakameyn tayo wanaagsan leh dhammaan heerarka wax soo saarku waxay noo suuragelinayaan inaan damaanad qaadno wadarta qanacsanaanta macaamiisha.
Maaddaama badeecadeenna tayada sare leh iyo adeegga macaamiisha ee aadka u sarreeya, waxaan la shaqeyneynay macaamiisha in ka badan waddammada 20. Haddii aad xiiseyneyso mid ka mid ah alaabteenna ama aad rabto inaad ka wada hadasho amar qaas ah, fadlan xor ayaad u tahay inaad nala soo xiriirto. Waxaan rajeyneynaa inaan la sameyno xiriir ganacsi oo guuleysta macaamiisha adduunka oo idil.
Nudaha haysta waa shay aad u dhow inkasta oo nudaha xubintu ay yihiin shay aad u yar, laakiin waxay khuseysaa sharraxaadda qoyska. Adeegsiga ugu weyn ee xubinta heysata ayaa ah inay dadka u keento raaxo weyn. Hadda guryaha kuma koobna oo keliya, ee waa meelaha dadku isugu yimaado.
Maalmahan, cadka haysta waa shay lagama maarmaan u ah nolol maalmeedkeena. Marka, waxaa jira noocyo badan oo kuwa unugyada kujira suuqa ku jira, ma ogtahay shaqada gaarka ah ee nudaha haysta?